Izindaba - Ukuzibophezela ekwandiseni ukusetshenziswa kwemithombo esimeme
Khulisa ukusetshenziswa kwemithombo esimeme
Yonke impahla nezinto zokupakisha, ngokushintshela ezintweni ezisimeme, kwehlisa umthwalo emvelweni, kunciphise ukwenziwa kwemfucuza ngomjikelezo wempilo, kunciphisa ukusetshenziswa kukawoyela wemvelo, futhi kufaka isandla ekufezekisweni komphakathi oyisiyingi.
Nciphisa ukusetshenziswa kwamanzi, uqinise ukuphathwa kwendle namanzi angcolile,
Ngenxa yezinkinga eziya ngokuya ziba zimbi zokuncipha kwemithombo yamanzi nokuwohloka kwekhwalithi yamanzi, izibophezele ekwehliseni inani lamanzi adingekayo ekukhiqizweni nasekusebenzeni, nasekunciphiseni umthwalo wezindle wokukhishwa kwendle.
· Nciphisa ukungeniswa kwamanzi ngokugxila ekusebenzeni kwamanzi futhi uphinde uwasebenzise ezindaweni zokukhiqiza ezindaweni ezinezinkinga zamanzi.
· Landela imigomo yenkampani yayo ngokuya ngemithetho nezimiso zikahulumeni namazinga embonini afana neZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemical Substances) bese wenza ukuphathwa kwamanzi angcolile kuzo zonke izindawo zokukhiqiza.
Ukuphathwa nokuncishiswa kwamakhemikhali
Ukuze kuqinisekiswe impilo ecebile yezizukulwane ezizayo, inkampani inciphisa umthelela nomthwalo wamakhemikhali emvelweni.
Ngokuya ngamabhentshimakhi embonini afana ne-MRSL (Uhlu Lwezinto Ezinqunyelwe Esikhathini Sokukhiqiza) ngokususelwa ku-ZDHC (Ukukhishwa Kwezinto Eziyingozi Zamakhemikhali), lawula ukusetshenziswa kwezinto zamakhemikhali kuzo zonke izici zenqubo yokukhiqiza kusuka ekungeneni kuya phambili ukunciphisa ukusetshenziswa wezinto zamakhemikhali.
Thobela imithetho yezimboni efana ne-Standard 100 ka-Oeko-Tex ukuqeda ukusetshenziswa kwezinto ezivinjelwe emikhiqizweni.
Thuthukisa izindlela ezintsha zokukhiqiza ukunciphisa ukukhishwa kwamakhemikhali ayingozi.
Hlonipha amalungelo abantu futhi ugcine indawo yokusebenza enobulungiswa futhi iphephile
Sazisa umqondo womhlaba wonke wokuhlonipha isithunzi namalungelo abo bonke abantu futhi sifaka isandla emphakathini ohlukahlukene futhi ozinzile.
Ngokuqashelwa nokuhlonishwa kwelungelo lomuntu eliphelele